နဂါးနီ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နဂါးနီ ဟစ်ပ်ဟော့ပ်
Posted by ကျော်ဘသစ် on Jan 6, 2014 in Creative Writing, Short Story | 15 comments
တစ်နေ့သ၌ ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ အမေရိကန်ဗီးရှင်းမျက်မှန်ဆိုင်ထဲသို့ ကြောက်ရွံ့ရွံရှာဖွယ် အသွင်အပြင်ရှိသော ဘိုးတော်တစ်ဦး ၀င်လာသည်။ မွဲထပ်ထပ်ဆံပင်၊ ဖရိုဖရဲမုတ်ဆိတ်၊ အညိုရောင် ညစ်ထေးထေးဝတ်ရုံကို ၀တ်ဆင်ထားသည့်အပြင် တစ်လုံးက အာလူးသီးလောက်၊ တစ်လုံးက ခရမ်းချဉ်သီးလောက်၊ မညီမညာ အသတီချင်စရာ အပြင်ကို ပြူးထွက်နေသော သူ့မျက်လုံးကြီးများကို ကြည့်ရင်း တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်နေသည့်ကြားက အရောင်းစာရေးမလေးတစ်ယောက်က တာဝန်အရ အရဲစွန့်ပြီး မေးရှာသည်။
“ဟုတ်… ဟုတ်.. ဟုတ်ကဲ့၊ ဘာ… ဘာ.. ဘာအလိုရှိပါသလဲရှင်”
“မျက်..မျက်… မျက်မှန်က အမျိုး..မျိုး..မျိုး..မျိုးမျိုး ရှိပါတယ်၊ ဘ… ဘ.. ဘယ်လိုမျက်မှန်မျိုး လိုချင်ပါသလဲရှင်”
“နေ…နေ.. ကာမျက်မှန်ကလည်း အမျိုးမျိုး ရှိတယ်၊ ဘယ်လိုအမျိုးအစား ယူမလဲ..လဲ..လဲ..ရှင်”
“ဘာပဲရရ၊ ငါ့မျက်နှာပေါ်က နွားမျက်လုံးနဲ့ ဆိတ်မျက်လုံးကို ဖုံးလို့ရရင်တော်ပြီ”
ထိုသို့ဖြင့် အရောင်းစာရေးမလေးမှ ထိုထူးဆန်းခြောက်ခြားဖွယ် ဘိုးတော်အား RayBan မျက်မှန်တစ်လက် ရောင်းချပေးလိုက်သည်။
ဘောင်ချာထဲက Customer Name နေရာမှာ ယင်းဘိုးတော်ရေးပေးထားခဲ့တဲ့နာမည်က…
တစ်နေ့သ၌ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်းမနံဘေး၊ နွေနန်းတော်ဟိုတယ် ဧည့်ခန်းတွင် အဘိုးအိုတစ်ဦး ထိုင်နေသည်။ မျက်နှာလေးထောင့်၊ ဆံပင်ရှည်ရှည်၊ တိုက်ပုံအင်္ကျီနှင့် ပုဆိုးကို ဒူးလောက်အထိ တိုတိုဝတ်ထားပြီး ခြေကလင်ချိတ်ကာ စီးကရက် ထိုင်ဖွာနေသော ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က လာမေးသည်။
“အဘမဟုတ်ဘူးကွ၊ အဘိုး..၊ ဘိုးဘိုး”
“ဟုတ်ကဲ့… ဘိုးဘိုး၊ အခန်းယူမလို့လားခင်ဗျ”
“အေး၊ ဒါပေမယ့် အိပ်ခန်းတော့ မဟုတ်ဘူး၊ အနှိပ်ခန်း ယူမှာ”
“ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်၊ ဘယ်နှစ် section ယူမလဲခင်ဗျာ”
“ငါ ဒီအတိုင်း ခြေကလင်ချိတ် ဆေးလိပ်ဖွာနေရတာ နှစ်ပေါင်း ရာချီနေပြီ၊ သောက်ရမ်း ညောင်းတယ်၊ အဲတော့ ၁၂ နာရီလောက် နှိပ်မှ နေသာထိုင်သာ ရှိမယ်။ လောလောဆယ် ၁၀ နာရီ ပေး”
ထိုသို့ဖြင့် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းမှ ယင်းဘိုးဘိုးဆိုသူအား အခန်းတစ်ခန်းနှင့် အနှိပ်သည်တစ်ယောက် စီစဉ်ပေးလိုက်လေတော့၏။
ဟိုတယ် Reception မှာ သူ့နာမည်စာရင်း သွင်းသွားတာက…
တစ်နေ့သ၌ ရန်ကုန်မြို့၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်းမရှိ စတီးလ်သံပန်းပြုလုပ်ရာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ RayBan မျက်မှန်တပ်ထားသော ဘိုးတော်တစ်ယောက်နှင့် တိုက်ပုံအင်္ကျီဝတ်၊ ဆံရှည်၊ မျက်နှာလေးထောင့်ရှိသူ အဘိုးအိုတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ ဆိုင်ရှင်က ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးအား ယဉ်ကျေးပြူငှာစွာ မေးလာသည်။
“ဘာအလိုရှိပါသလဲခင်ဗျာ” (…ဆိုတော့ မျက်မှန်နဲ့ ဘိုးတော်က…)
“စတီးချောင်း တစ်ယောက်တစ်ချောင်းစီ လိုချင်တယ်”
“အော်.. လူကြီးမင်းတို့ တောင်ဝှေးလုပ်ဖို့နဲ့ တူတယ်” (…ဆိုတော့ ဆံရှည်အဘိုးကြီးက…)
“မဟုတ်ဘူးကွ… ။ အဖျားဖက်က ချွန်မြနေတဲ့ စတီးလ်ချောင်းမျိုး လိုချင်တာ၊ အရှည် နှစ်တောင်လောက်ပေါ့ကွာ။ ငါတို့က ဟိုတုန်းက ၀ါးချွန်တွေပဲ သုံးခဲ့ကြတာလေကွာ၊ အခုတော့ ခေတ်နဲ့အညီ စတီးလ်ချွန်တွေ ပြောင်းသုံးတော့မှာ”
ထိုသို့ဖြင့် ဆိုင်ရှင်မှ အရံသင့်လုပ်ထားသော စတီးလ်ချွန်နှစ်ချောင်းကို ထုတ်ပေးလိုက်ရာ ထိုဘိုးတော်နှင့် ဘိုးဘိုး နှစ်ယောက်လည်း အချွန်တစ်ယောက် တစ်ချောင်းစီ ခါးမှာ ထိုးဝှက်ပြီး သမိန်ဗရမ်းလမ်းမကြီးအတိုင်း ခပ်တည်တည် ထွက်ခွါသွားကြလေတော့သည်။
ထိုသို့ဖြင့် တစ်နေ့သ၌နှင့် နေ့တိုင်းနီးပါးတို့၌ နံနက်ခင်း၊ နေ့လည်ခင်း၊ ညနေခင်းနှင့် ၂၄ နာရီနီးပါးတို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းဆုံလမ်းခွအသီးသီးမှ မဏ္ဍပ်အသီးသီးတို့တွင် ဟစ်ပ်ဟော့သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ် မြိုင်ဆိုင်စွာ ထွက်ပေါ်လာလေတာ့၏။
.မ… မ… မ,တဲ့ကိန်း ဆိုက်မည်ဗျ.. ဟ…
တို့မြန်မာပြည်ကွ… ဟ… အာဟ… အာဟ….”။ ။
ပြင်လို့လည်း ရတော့ဝူးနော်…။ ဘဘအနဲ့ ဘမခနဲ့ မွှားနေလို့…။
၀ါးချွန်ကိုင်တာ ဘယ်ဘိုးတော်လဲ ၊မသိလို့။
အဘ က ခဏတွေ့ချင်လို့တဲ့
ကိုဂျီးတို့နဲ့ ခဏ လိုက်ခဲ့ဘာအုံး …
အနော်ရထာကတော့.. ခြေရာတိုင်းလာတဲ့သူရဲကောင်းတွေရှင်းချင်တာနဲ့.. “နတ်စိမ်း”ထွင်ပြီး.. လူထုကိုမျက်လှည့်ပြတယ်…
ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ က..မုဆိုးမဆီက.. ရွှေတွေအပြောင်ရိုက်တာ.. လူမသိအောင် “မ”တယ်နေမှာ..
ဘိုးမင်းခေါင်.. ဘိုးဘိုးအောင်တို့လည်း.. ဒီလိုနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေကနေ… သိပ်ခြားနားမယ်မထင်…။
ဦးစိန်လွင်ကပဲ.. အရှင်ထွက်လိုလို.. အသေထွေက်လိုလို.. ထိုင်ကန်တော့ရမလိုလို…
ဟိုလိုလို.. ဒီလိုလိုနဲ့.. နောက်နှစ်၁၀၀လောက်နေရင်… သမိုင်းထဲက ဘိုးတော်ဖြစ်နေဦးမှာ…
သူကြီး kai မှားနေပါတယ်
လောကီပညာဆိုတာ အခြားလူမျိုးတွေမှာလည်း ရှိပါတယ်
သို့သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ မလှောင်ပြောင်သင့်ပါ
အချွန်နဲ့ အ မ ခံရတော့ မဲ့ တို့ ပြည် တို့ မြေ။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ ဝေဖန်မိလို့ တရားစွဲ၊ နှစ်ရှည် ထောင်ချတာတွေ ရှိတယ်…။
ဘိုးတော်တွေ၊ နတ်တွေ (organized order မရှိတဲ့ကိုးကွယ်မှု) ကို ဝေဖန်ရင်ကော အပြစ်ပေးကြသလား…။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံပြင်က (ဘိုးတော်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်လှပဲ) ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လူတွေကို မ,မယ်၊ ကယ်တင်မယ် ပြောပြီး နိုင်ငံကို State and Church ဝေမျှအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြ၊ ဆက်ပြီးတော့လည်း ဝေမျှအုပ်ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ ခံစားရတာကို ရေးတတ်သလို ရေးလိုက်တာပါ။
ဒီလိုလုပ်ခဲ့၊ လုပ်နေတာတွေ သက်သေရှိလို့ ချရေးဖြစ်တာပါ။
(ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဟာ ဘိုးတော်ချင်း မှားနေတယ်…၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အက်ဒ်မင်အခွင့်အရေးရှိသူတစ်ဦးဦးက ပြန်ပြင်ပေးနိုငရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ…။)
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်၊ လေးစားလျှက်….
အရင်စစ်အစိုးရက.. ဘာသာရေးသုံးပြီး… နိုင်ငံရေးကစားခဲ့တယ်…။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့.. ပျော့ကွက်ကိုနောကြေနေတဲ့.. စစ်တပ်ဟာ.. ဒီနှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ.. နည်းအတိုင်းဆက်ကစားဦးမယ်လို့… တတ်အပ်ပြောလို့ရတယ်..
ဒါကို.. ဒီအင်တာဗျုးက.. တစွန်းတစ.. ပြတယ်..
အင်တာဗျုးပေးပြီး လှစ်ဟပေးလိုက်တဲ့.. မြန်မာသံတော်ဆင့်မီဒီယာကို.. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း….။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏အခါတော်ပေး နိုင်ငံတော်အကြံပေး ဒေါက်တာဖေဉဏ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း – မောင်ရေစက်
နောက်တစ် ခုက ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဦး၊ ထောင်ကျသွားတယ် ထောင်ကပြန်ထွက် လာတော့ ကိစ်္စတစ်ခုနဲ့ သူနဲ့ ရင်းနှီးသွားတယ်။ သူသေကာနီးမှာ ပြောတယ် ဆရာကိုဖေဉာဏ်တဲ့ ကျွန်တော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းကို သိပ်ကျေးဇူး တင်တာပဲတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်တာလဲ ဗိုလ်ချုပ်လို့ တစ်ချိန်တုန်းက နိုင်ငံတော်မှာ အရေးပါတဲ့ ပုဂိ်္ဂုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့လား ဆိုတော့ အဲဒါကြောင့် မဟုတ်ဘူးတဲ့ ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်တာ ကျွန်တော့်ကို ထောင်ချ လိုက်လို့တဲ့။ ထောင်ချလိုက်တော့ မဟာစည် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရားစာအုပ်တွေ ကျွန်တော်မှာ ဖတ်တယ်တဲ့။ မှာဖတ်ပြီးတော့ တရားအား ထုတ်တယ်တဲ့ ကျွန်တော်ကျကျ နနတရား အားထုတ်လို့ တရားရသွားတယ်တဲ့။ ဘယ်လောက်ထိ ကျွန်တော် တရားရလဲ ဆိုရင်ကျွန်တော်အခု လက်လေးခြေလေးတွေ လှုပ်ရှားလိုက်ရင် ဖျပ်ဖျပ်ဖျပ်ဖျပ်နဲ့ အကုန်လုံးမြင်နေတယ်တဲ့။ ကျွန်တော် ( ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်ဦး) မကြာခင် သေမယ်တဲ့ သေရင်ကျွန်တော် ဗြဟ္မာဘုံကို ကျွန်တော် သွားမယ်တဲ့။ သူတစ်ယောက်ပဲ ပြောခဲ့တယ်လို့ ထင်တယ်။ တခြားသူတွေလည်း ပြောရင်ပြောမှာပေါ့ လေ။ အဲလိုပြောပြီးတော့ သူ ၁၀ ရက် လောက်မှာ သေသွားတယ်။ တိုင်းပြည်က ကြားရင် ဒီလောက် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ သူကြီးကို ဒီဦးဇင်းကြီးက ဘာဖြစ်လို့ ပြောသလဲဆိုပြီးတော့ ထင်ဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားက အမှန်ဖြစ်တယ်။ တို့တိုင်းပြည်မှာ အဲလိုပဲ ဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေ အများကြီးရှိ ခဲ့တယ်။ သမ္မတကြီး ဦးစိန်လွင်လည်း အဲလိုပဲ။ ဦးစိန်လွင်နဲ့ တွေ့တော့ဘာ ပြောလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်အရင် ဘ၀တွေ တုန်းက ဆုပန်တုန်းက မောင်နှမခုနှစ် ယောက်ရှိခဲ့တယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ၆ ယောက်က ဆုပန်ခဲ့တယ်တဲ့။ ကျွန်တော် ကစောင့်နေ တာတဲ့။ အဲဒီမှာဘယ်သူတွေ ပါလဲဆိုတော့ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရွှေတောင်ကုန်း။ ရွှေတောင်ကုန်းနှင့် ဦးပွင့်ကောင်းတို့နဲ့ ပြဿနာတက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပုသိမ်မှာ သဒ္ဓမ္မသီတဂူ ဆရာတော်ကြီးဆိုတာ ရောက်လာပြီး ထိန်းပေးတယ်။ သဒ္ဓမ္မသီတဂူဆရာ တော်ကြီးက ရွှေတောင် ဘုန်းကြီးထက် ပိုပြီးတော့ဝါကြီးတယ်။ သဒ္ဓမ္မသီတဂူ ဆရာ တော်ကြီးကနေနေတဲ့အချိန်မှာ ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတက ထွက်သွားပြီးတော့ မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ပျံလွန်တော်မူပြီး တော့၁၂နှစ် အကြာမှာ ဦးထွန်းသာဆိုတဲ့ ပုဂိ်္ဂုလ်ကြီးက ကန့်ဘလူမှာရှိတယ်။၁၃၀၇ ခုနှစ်က ဆရာတော်ကြီး တရားပြ တုန်းက မြေတိုင်း အင်စပတ်တာ ဦးထွန်းသာ တရားလာ အားထုတ်တယ်။ ကန့်ဘလူးမှာတော့ ဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော် မူပြီးတော့ အရိုးတော်တွေစု ပုလင်းလေးနဲ့ သိမ်းထားတယ်။ စနေနေ့ကျတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ် တာပေ့ါ။ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ထင်တယ်။ သူက၀မ်းသာ အားရ ရန်ကုန်ကဆင်းလာတာ။ ဆရာတော်က အိပ်ရာထဲ လဲနေပြီ။ သာသနာရေးဦးစိန်လွင် ရဟန်းဝတ်ပြီး တရားအားထုတ်တယ်။ မဟာစည်ဆရာတော် ကြီး ဓာတ်တော် မကျဘူးလို့ ပြောလာ နိုင်တယ်။ ရှင်းလို့ရအောင် အဲလိုမျိုးဓာတ်ပုံ ရိုက်ခိုင်းထားတာ။
အဲဒီအချိန်မှာ မဟာစည်မှာရှိတဲ့ တချို့ ဘုန်းကြီးတွေတောင်မှ သိပ်လက်မခံချင်ဘူး။ သဒ္ဓမ္မသီတဂူ ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်။ သူကရယ်နေတယ်။
မင်းတို့ အကုသိုလ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ငါ မပြောတာတဲ့။ သေးသေးလေးအလုံးတွေ အများကြီးပဲတဲ့။ ငါဘုရားဌာပနာထဲ ထည့်ထားတယ်တဲ့။ သူရယ်ပြီးပြောတာ။ ဗိုလ် ချုပ်စန်းကြည်ဆိုတာ ဦးကြည်လွင်ဒုတိုင်း မှူးဘ၀တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့ ဆရာပေ့ါ။
ကျွန်တော် (ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးချုပ် တင်ဦး)မကြာခင်သေမယ်တဲ့ သေရင်ကျွန်တော် ဗြဟ္မာ့ဘုံကို ကျွန်တော် သွားမယ်တဲ့။ သူ တစ်ယောက်ပဲ ပြောခဲ့တယ်လို့ ထင်တယ်။ တခြားသူတွေလည်း ပြောရင် ပြောမှာ ပေါ့လေ။
အဲလိုပြောပြီးတော့ သူ ၁၀ ရက် လောက်မှာ သေသွားတယ် . . .
ဗိုလ်မှူးစန်းကြည်ရဲ့ အမတစ်ဦး။ သဒ္ဓမ္မ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ရဟန္တာဖြစ် သွားပြီလေ။ သဒ္ဓမ္မသီတဂူ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးစန်း ကြည်အစ်မ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြည်လွင်ရဲ့ အမိ ကျန်တာ လေးဦးကတော့ ကျွန်တော်မသိ ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြည်လွင် ၂၀၀၄မှာဆုံးသွား တဲ့အချိန်မှာ ရေဝေးကိုပါသွားတယ်။ သူ့ သွားကိုင်တယ်။ပျော့ပျော့လေး။ ထိုင်လို့ထ လို့ရတယ်။ ဆိုလိုတာက ရဟန္တာဖြစ်သွား တယ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်။ ဦးစိန်လွင်က လူ့ဘ၀နဲ့ ဆုံးသွားတာ။ ၅လ၊ ၆လလောက် ရဟန်းဝတ် သွားတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် စင်ကာပူတို့ကို ဆေးသွား ကုလိုက်သေးတယ်။ အိမ်မှာဆုံးတယ်။ မြန်မာပြည်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓသာသနာနောက်ဆုံးကျန်တဲ့တိုင်းပြည်။တိုင်း ပြည်မှာ လာဖြစ်တဲ့ အကြီးအကဲတွေက ဘုန်းရှင်၊ ကံရှင်တွေဖြစ်ကြတာ။ မုန်းတဲ့ လူလည်းရှိမှာပဲလေ။ ဘယ်သူမဆို ကျေနပ် အောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလေ။ တန်းခိုးကြီးတဲ့ ဘုရားတွေတို့တိုင်းပြည်မှာ အများကြီးလေ။ ဓာတ်တော်၊ မွေတော်တွေလည်း အများကြီးလေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ ကြီးကျယ်စရာ၊ ဂုဏ်ယူစရာ မရှိဘူးလေ။ ဘုန်းကြီးတဲ့ ပုဂိ်္ဂုလ်တွေ အကြောင်း ပြောပြ တာ။ ဥဒယဉာဏ်၊ ဘင်္ဂဉာဏ်၊ အဘိ န၀ဉာဏ်၊—သင်္ခရုပက္ခဉာဏ်၊ သူတို့က အနုရောပဉာတ် တိုင်အောင် အကုန်ပြန် လေ့လာရတယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ လည်း ပေါ်လာပြီး ပျောက်ပျောက်သွားတယ်။ ပေါ်လာ လိုက်၊ ပျောက်သွားလိုက်။၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု ကစွန်းလွန်း ဆရာတော်ကို မေးတယ်။ အရှင် ဘုရား နိဗ္ဗာန်ရောက် ကြောင်းဘယ်လိုလုပ် ရလဲ။ မင်းဘင်္ဂဉာဏ်လှူပါတဲ့။
နာမည်ကျော်ကြားသူတွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ပြောချင်ရာပြောတဲ့အင်တာဗျူးပဲ။
တစ်ခုမှ အနစ်မရှိဘူး ။
သူ့အပြောအရ ဆရာတော်င်္ကြးတွေ ဂုဏ်ငယ်ရတယ်
ဒီလိုကောင် နိုင်ငံတော်အကြံပေးဖြစ်တာ နာတယ်ကွာ
ဒီအင်တာဗျူးဖတ်ပြီး မျက်စိတွေကို လည်သွားတာပဲ၊ဘာဆိုလိုချင်မှန်းကိုမသိဘူး။သူရေးထားတဲ့ ဉာဏ်တွေလည်း နာမည်တွေ မှားနေပါတယ်။
သေတော့ ပျော့ပျော့လေးဆိုတာ ရဟန္တာလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
သံသရာက လွတ်တဲ့ ရဟန္တာ အဆင့်ကို ဒီလို သေတော့ ပျော့တယ်ဆိုရုံနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။
ကျမအဖေတောင် ဆုံးပြီး ၂၈ နာရီကြာမှာ ပျော့ပျောင်းနေတာ ဗီဒီယိုရိုက်ထားသေးတယ်။
သေပြီး မတောင့်တင်းတဲ့ သူတွေအကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုခွေရှိပါတယ်။၀ိပဿနာအကျိုးလို့သာပြောတာ ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြခြင်းမရှိပါ။
ကိုရင် San Hla Gyi နဲ့ အူးကြောင်ရဲ့ ကောမန့်များကို စောင့်ဖတ်ပါဦးမည်
သူကြီး တင်ပေးတဲ့အင်တာဗျူး တစ်ခါမှ မဖတ်ဖူးဘူး…။
ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကနေ နတ်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့ နတ်သမီးနဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်တယ် (ဆိုတာမျိုး ခပ်ဆင်ဆင်တော့) ဖတ်ဖူးတယ်…။
အင်း… ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုိတော့… ဘယ်လိုမှ မပြောချင်တော့ဘူး….။
ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ တစ်ခုတော့ ပြောချင်သေးတယ်…
ပြီးခဲ့တဲ့ ၄-၅ နှစ်လောက်က ကျွန်တော်လည်း တစ်ခု စမ်းသပ်ဖူးတယ်။
ရိတ်ပြီးသား နှုတ်ခမ်းမွေးတွေ စုပြီး သောက်ပြီးသား အရက်ပုလင်းပြားထဲ ထည့်ထားတာပါ။
အံ့သြစရာကောင်းတာက… အတော်ကြာတော့ နှုတ်ခမ်းမွေးတွေ လုံးနေတာ တွေ့ရတော့တာပဲ…။
အခုအင်တာဗျူး ဖတ်ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်လည်း အဆင့်တစ်ခုခုများ ရောက်နေပြီလား သံသယ ၀င်မိတယ်….
နဂါးနီဟစ်ဟော့ ကျေးဇူးနဲ့ အချွန်နဲ့ မ တဲ့ ဇာတ်လမ်းအစကို သိလိုက်ရတယ်။
ဟိုးတုန်းက ၀ါးချွန်၊ ခုခေတ်တော့ စတီးချွန် ဆိုတော့ကာ………